डिसेम्बर 14, 2018 डिसेम्बर 14, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, धर्म संस्कृति, सनातन
सनातन धर्म संस्कृतिको अवमुल्यन गर्नेले एकपटक सोच्ने कि ! भगवान शिव भन्नुहुन्छ सैतानले सैतानियत देखाउनाले आज मानिस मन्द बुद्धिका हुदैछन् भन्नु भएको छ । पाप र पुन्य केहो भन्ने कुरा नबुझ्नाले मानिस गलत माथि गलत गर्दै गएको छ । जब-जब धर्म संस्कृतिको व्यापार मानिस गर्न थाल्छन् त्यति बेला सैतान हावी भएको हुन्छ । दिमागरूपी इन्जनमा केवल पैसा नै ठूलो भन्नेहरुको तागत बढ्दै जानाले नेपाल पवित्र भूमिमा सैतानी पन्जा हावी भएको हुन्छ ।
के गलत के सहि भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु नै दु:खद हो यसैको प्रतिफल आज नेपाली जनताले भोक्दैछन् । कर्म गरेर कमाएको सम्पत्तिमा भन्दा गलत तरिकाले जोडेको सम्पत्तिमा डर बढी हुने हुनाले गलतमाथि गलत गर्दै जान थाल्दछ । गलत गर्ने व्यक्तिको आन्तरिक मनमा एक प्रकारको डरले डेरा जनाएको हुन्छ ।
डर र त्रासकै कारण उ दिनप्रती दिन रोगको दलदलमा फस्दै जान थाल्दछ । यसको उपचार भनेको शिवको आराधना एकमात्र विकल्प रहन्छ । म बाँच्दासम्म मेरो सम्पत्ति हो तर मरेपछि के हुन सक्छ भन्ने कुरा दिमागबाट फाल्ने काममा शिवको ध्यान गर्नाले मात्र सबैको कल्याण हुन सक्नेछ । गलतले हानी र सहिले फल शिवको आराधनाबाट मात्र सम्भव छ ।
← बच्चाहरुको अण्डकोष सुन्निएको नि:शुल्क उपचार
रुघाखोकीको घरेलु उपचार →